Coronavirus ; iyo Salaadaha Jamaacada - Awdinle Online
Coronavirus ; iyo Salaadaha Jamaacada
April 30, 2020 (Awdinle Online) –Sida ay caddeeyeen dadka bartay cilmiga caafimaadka, corona fayrusku (Covid- 19) waa cudur dhaqsa faafa, dhib badanna u gaysta banii-aadanka, geerida uu sababaana ay badan tahy. Dhaqaatiirtu waxaa ay caddeeyeen in qofka cudurkaas qaba uusan marka hore dhaqso u dareemi karin isaga oo aan iska warqabin ayuu cudurkaas u gudbinayaa cid allaale ciddii uu la kulmo. Waxaa kale oo ay caddeeyeen in sababaha uu ku faafi karo ay ugu wayn tahay is dhexgalka iyo kulammada meela xiran ka dhaca, sida fasallada wax lagu barto, maqaayadaha wax laga cuno, dukaamada wax laga iibsado, masaajiddada, gaadiidka guud ahaaneed, iyo meel allaale meeshii xiran.
Cudur kasta oo tilmaamahaas leh waxaa sharciga islaamka loo yaqaannaa Alwabaa’a. Culimada muslimiinta ee casrigaan joogta kuwooda muctabarka ah, sida culimada Al Azhar, markay arkeen warbixinta ay cudurkaan ka bixiyeen dhaqaatiirta iyo masuuliintuba waxay fatwoodeen in ay bannaan tahay in la joojiyo si ku meel gaar ah salaadda jamaacada iyo salaadda jimcahaba cabsi laga qabo darteed in cudurkaani ku faafo beledka. Qof kasta waxaa u bannaan in uu shanta salaadood gurigiisa ama meel aan dad kale joogin ku dukado. Salaadda jumcahana waqtigeeda uu afar rakcadood oo duhur ah dukado si looga hortago ama loo yareeyo faafidda cudurkaan dilaaga ah.
Fatwadaan culimadu bixiyeen waxaa daliil u ah xadiith ay soo saareen Bukhaari, Muslim, Abuu daawuud, Ibnu Maajah, iyo Imaam Axmad, xadiithkaasi wuxuu caddaynayaa in Cabdullaahi ibnu Cabbaas – Ilaahay haka raali ahaadee- uu maalin jumca ah roobna da’ayo mu’addinkii amaryay inuu aadaanka dhexdiisa ku naadiyo “guryihiinna ku dukada” markuu naadi lahaa “salaadda u kaalaya.” Markii uu arkay in dadkii meesha joogay ay ku inkirayaan amarka uu bixiyay, ayuu yiri waxaa sidaan sameeyay qof iga khayr badan, wuxuuna ula jeedaa Nabiga – sallalaahu calayhi wasallam- jimcadu waa waajib, waxaana kahanayaa in aan idin dhibo oo aad ku socotaan dhoobo iyo sibxasho.
Sida aan arkayno, salaaddi jimcaha waa la joojiyay, dhibka jirayna wuxuu ahaa ku socodka dhoobada roobku sababay iyo in lagu dhex kufi karo oo kaliya. Dhibkaasi ma gaarsiisnayn heer dhimasho ama inuu sababo jirro xanuun badan sida corona fayruska oo kale.
Haddiiba jamaacadi iyo jimcadiiba dhibka sidaa u fudud dartiis loo joojiyay, in dhibka corona fayraska ka dhalanaaya dartiis loo joojiyo salaadda jamaacada iyo jimcahaba ayaa ka sii habboon. Sababtuna waxaa waaye maqaasidda (ujeeddada) shareecada islaamka waxyaabaha ugu waawayn waxaa ka mid ah dhawridda nafta banii-aadamka, iyo ka ilaalinta wax allaale wixi dhib u keeni kara.
Haddaba, waxaa habboon waqtigan musiibadaan cudurka ahi socoto in la raaco talooyinka dhaqaatiirtu bixinayaan iyo amarrada ay masuuliinta ummadda hoggaamisa farayaan. Ma haboona in buuq, jahawareer, isqabqabsi ummadda lagu dhex abuuro iyadoo aqoon diineed la sheeganayo.
Previous articleMashiinka “Ventilator” Ma u Yahay Lagama Maarmaan Badbaadada Bukaanka COVID-19?
Next articleDhambaalka Madaxweynaha ee Maalinta Shaqaalaha Adduunka 1-da May
Todobaadkaan oo la fasaxaya duulimaadyada gudaha Soomaaliya
Cabdiraxmaan Tuuryare oo war ka soo saaray dil walaalkiis loo geystey
Gobolka Banaadir oo loo ogolaaday in uu matalaad ku yeeSho Aqalka Sare
Labo bil kadib xernaan shihii Masjidka Nabiga oo dib loo furay
Maamulka Gobolka Sh/Hoose oo ka hadlay dadkii ku dhintay Qaraxii deegaanka lafoole
Howlgal lagu laayey Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Axmed Madoobe oo Kismaayo ka furay Shir dib u heshiisiin ah
Qarax dad badan ku dhinteen oo ka dhacay duleedka Muqdisho